Xiddiga Tottenham Harry Kane ayaa burcad dhac u geysatay dharaar cad Bariga London… – Hagaag.com
Xiddiga Tottenham Harry Kane ayaa burcad dhac u geysatay dharaar cad Bariga London…
Posted on 14 Nofeembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Wargeyska Ingiriiska ee “THE SUN” ayaa qoray maanta oo Sabti ah in weeraryahanka kooxda Tottenham Hotspur Harry Kane ay burcad dhac u geysatay dharaar cad kuwaasi oo ku takhasusay xatooyada xiddigaha kubada cagta ee England.
Wargeysku wuxuu sheegay in gaariga laga dhacay Kane uu ahaa Range Rover, oo qiimahiisu ka badan yahay 130 kun oo doolar, ay xadeen koox xirfadlayaal ah oo adeegsanaya qalab elektiroonig ah oo gawaarida lagu furo, dhammaadkii bishii hore iyagoo falkaasi ay geysteen dharaar cad.
Xubnahan burcadda ah ayaa duubtay kaamerooyinka ilaalada ah markii ay ku meeraysanayeen gaariga hortiisa, kaasoo yaalay agagaarka guriga Kane ee Bariga London, iyadoo looga shakisan yahay inay yihiin burcad ku takhasustay xatooyada xiddigaha kubada cagta.
Xatooyada ayaa ku soo korortay xiddigaha kubada cagta ee Premier League labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan 3 ciyaartoy oo Tottenham ah, oo kii ugu dambeeyay uu yahay Kane, kuwaasoo horey u dhacay Dele Alli iyo Jan Vertonghen.
Inkasta oo Kane uu ku faraxsanaa in isaga iyo qoyskiisuba ay bedqabaan, haddana – sida laga soo xigtay ilo ku dhow dhow – walaac ayuu muujiyey maxaa yeelay wuxuu dareemay in ay bartilmaameedsanayaan burcad ku takhasustay xatooyada ciyaartoyda kubadda cagta.